US_Airforce-Qalab-Hawada bilood 3 11 hours ago #1750
Adoo ku duulaya C-141 caadiga ah howl hawleed, oo la siinayo ciidamo gaar ah oo ka hawl gala Corsica. Waxaa laga yaabaa inay tahay Quud Bike oo loogu talagalay iyaga laakiin u badan tahay cunnadooda jimicsiga ?? x-plane waa 'toooo' fantasiya '
Dib-u-eegis [2020-04-10]: Waxaa la isku dayay in la geliyo nooca ugu yar ee tan X-Plane 11.41 Abuurid fiidiyow, oo ku lifaaqan lifaaqan.
Nooca buuxa waxaa HAY laga helay shabakadda hoosta ku xusan:
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: Dariussssss
Tafatirka ugu dambeeya: Waxaa qoray fredrikmyrl. Sababta: Ku darista isku xirka youtube-ka (Filimkan Youtube.com wuxuu ku xaddidan yahay kuwa gala galalkan)